'एमाले र माओवादी दुवैलाई कांग्रेसले समर्थन गर्दैन' शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
सोती घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले विवेक प्रयोग गरेको छ : डिएसपी श्रेष्ठ शुक्रवार, जेठ २३, २०७७
नेपाल भारतको छोटे भाई होइन : महासचिव पौडेल मंगलवार, जेठ १३, २०७७
'नेकपाको नेतृत्व विचलित हुने खतरा छ' - जनार्दन शर्मा यो दुई वर्षको अवधि पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुका साथै जनता र कार्यकर्तामा पैदा भएको उत्साहलाई शक्तिमा बदल्ने एउटा अवसर थियो । तर नेकपाले यो अवसर उपयोग गर्न सकेन भन्ने मलाई लागेको छ । औपचारिक रूपले स्थानीय रूपमै पार्टी कमिटीहरु त बने तर पार्टी एकताको उत्साहलाई ताकतका रूपमा प्रयोग गरेर दुईवटा पार्टी (नेकपा एमाले– माओवादी केन्द्र) लाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा कमी रह्यो । शनिवार, जेठ १०, २०७७
'आगामी बजेट स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ' आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा राज्यको भूमिका दरिलो बनाउन बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । “अहिले रोगसँग लड्नुपर्ने छ अर्कातर्फ भोकसँग पनि लड्नुपर्नेछ, उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ”, उनले भने, “काम र रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बढाएनौँ भने अर्थतन्त्र चल्दैन ।” न्यूनतम आर्थिक क्रियापकलाप सुचारु राखिएन भने रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट बचिँदैन ।” बुधवार, बैशाख ३१, २०७७
भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको सुचना थिएन ! मन्त्रीहरुले पनि यसबारेमा आफूलाई जानकारी नगराएको प्रधानन्त्री ओलीको दाबी छ । तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ६ महिनादेखि नै भारतले सडक बनाइरहेको सुचना पाइएको बताएका थिए । तर मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई यसबारेमा सुचना नदिएको भनेर झुटो बोलेको आशंका गरिएको छ । मंगलवार, बैशाख ३०, २०७७
सीमा विवादलाई प्रतिशतमा नहेरौ, समाधान खोजौ सांसदले ९० प्रतिशत हल भएको तर १० प्रतिशत सीमा विवाद बल्झिएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिशतमा भन्दा भारतसँगको सीमा विवादलाई समग्रमा समाधान गर्न चाहेको बताए । यसका लागि सबै दल र सांसदको सहयोग चाहिने भएकाले साथ दिन पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । आइतवार, बैशाख २८, २०७७
विश्व साइकल यात्रीलाई कुकुरले टोकेपछि...... सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहले लेखेका छन, भोका कुकुरदेखि सावधान । शनिबार बालुवाटारमा हिडेका उनलाई कुकुरले टोकिदिएपछि उनले सााजिक सञ्जाल फेसबुकमा यो स्टाट्स लेखेका हुन । आइतवार, चैत्र ३०, २०७६
निजी अस्पतालले लुट्ने मात्रै हो ? नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना महामारीमा उपचार दिन नसकेको भन्दै निजी अस्पतालको चर्को आलोचना गरेकी छन । अहिले कोरोना संक्रमणको बेला अन्य उपचार दिन पनि निजी अस्पताल जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि निजी अस्पतालको आलोचना भइरहेको छ । मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
सुनसान काठमाडौ (फोटोफिचर) बजारमा फाट्टफुट्ट मात्रै एक दुई जना मुश्किलले मान्छे देखिएका छन । धेरै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन । आवश्यक र भई परी आएका गाडी मात्रै चलिरहेका छन । बाँकी काठमाडौँ पुरै सुनसान छ । सायद नेपालमा यति लामो समयसम्म सुनसान भएको पहिलो पल्ट हो । बुधवार, चैत्र १९, २०७६
चट्याङ लागेर च्याउखोलाका स्याङ्तानको मृत्यु ! शनिवार, फाल्गुन २४, २०७६
आफै मानसिक रोगी, अरुलाई औषधि ! शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
अमेरिका : जहाँ कार उमारिन्छ ! शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
लिङ्ग टोकिदिने खेलाडीलाई पाँच वर्ष प्रतिबन्ध ! विपक्षी खेलाडीले लिङ्ग टोकिदिएपछि इन्तु न चिन्तु बनेका ती खेलाडीलाई तत्कालै अस्पताल लगाइयो । उनको लिङ्गमा १२ वटा टाँका लगाउनु परेको छ । शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
यी धनाढयको गर्लफ्रेण्ड खोज्नेलाई ३० करोड पुरस्कार ! गर्लफ्रेण्डको खोजीका लागि सुरु गरेको वेबसाइटमा उनले पुरस्कार राशीको घोषणा पनि गरेका छन् । जसले उनका लागि गर्लफ्रेण्ड खोजिदिन्छ उसले २५ हजार डलर अर्थात् झण्डै ३० करोड रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ । शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६